नेता कुर्सीको झगडामा व्यस्त रहँदा रवि लामिछाने गरीब दुःखिको झुपडीमा ! (फोटो फिचर) « Nepal's number 1 Entertainment news portal
नेता कुर्सीको झगडामा व्यस्त रहँदा रवि लामिछाने गरीब दुःखिको झुपडीमा ! (फोटो फिचर)
Published : 26 July, 2020 4:09 pm
यतिबेला कोरोनाको महामारी र बाढी पहिरो संगै निम्तिएको छ । तर सरकारको ध्यान कोरोना महामारी रोक्ने तथा प्राकृतिक विपत्तिमा परेका पीडितको समस्यामा मलम लाउने भन्दा कुर्सितर्फ ध्यान सोझिएको छ ।
सरकारको अपरिपक्क कार्यशैलीको विरोध गर्दै केही समय अघि युवाहरु सडकमा समेत उत्रिए, युवाहरूको गुनासो तथा उनीहरूले उठाएका विषयको सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले आश्वाशन त बाँड्यो,
तर युवाहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भनेको सरकारले आन्दोलनलाई थामथुम मात्र गर्यो , न त युवाको माग पूरा गर्यो न त आफ्नो नियमित कार्यक्रम नै राम्रो ढंगले गर्यो ।
कोरोना रोकथाम गर्ने भन्दै लामो समय लक डाउन गरेको सरकारले कोरोना परीक्षण को दायरा बढाएको त छैन नै , यतिबेलै सरकारमा आवद्ध दल आन्तरिक किचलोमा रुमलिएको छ । बाढीपहिरोबाट पिडित जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने सरकार कुर्सी जोगाउन र कुर्सी हत्याउन व्यस्त छ ।
बरु कतिपय समाजसेवी र पत्रकारहरुको यतिबेला पीडितको घरैमा पुगेर उनीहरूको पीडामा मलम लगाउने कोसिस गरिरहेको छ । त्यस्तैमा चर्चित पत्रकार रबि लामिछाने नियमितरुपमा स्टुडियोबाट प्रसारण हुने सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम पीडितहरूको घरदैलोमै पुगेर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
उनले गत हप्ता प्रदेश १ बाट कार्यक्रम संचालन गर्दै अहिले प्रदेश २ का जनताका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । पीडितसम्म सरकारको ध्यान नपुगेको बेला पत्रकार रवि लामिछानेले गरेको यो कार्यको चारैतिरबाट समर्थन भइरहेको छ ।
कतिपय बाट रबि लामिछाने अब प्रधानमन्त्री भएर यो देशको समस्याको निकास तथा विकासको बाटो तय गर्नुपर्ने विचार समेत राख्ने गरेका छन् । रबि लामिछानेको कार्यको प्रशंसा सबैबाट भइरहेकोछ ।